မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူရည်းစားအချစ်နှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်းပါး၊ ဗွီဒီယို၊ နိုင်ငံတကာသီချင်းများ၊အနုပညာရှင်တို့၏ဓါတ်ပုံများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ၊ တားရော့ဗေဒင်နှင့် ဂိမ်းများကိုအချစ်ကမ္ဘာထဲအကန့်အသတ်မရှိ စီးမျောခံစားနိုင်ဖို့အခုပဲ "အချစ်ကမ္ဘာ" ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ရန် http://achitkabar.com မှ တစ်ဆင့် (သို့မဟုတ်) 8274 ကို ON ဟုပေးပို့လိုက်ပါ။ တစ်ရက်လျှင် ဝန်ဆောင်ခ ၉၉ ကျပ်သာကျသင့်မှာပါ။
ချစ်သူရည်စား၊ မိသားစုဝင်၊ သူငယ်ချင်းများကြားကအချစ်အမျိုးမျိုးကိုကဏ္ဍမျိုးစုံဖြင့် ဖော်ကြူးထားသည်။
2. “အချစ်ကမ္ဘာ” ကိုအသုံးပြုလိုပါကဘယ်လိုရယူရပါမလဲ?“အချစ်ကမ္ဘာ” ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခမှာဘယ်လောက်ပါလဲ?
အချစ်ကမ္ဘာ ဝန်ဆောင်မှှုအားအသုံးပြုလိုပါက8274သို့ ON ဟုပေးပို့ပြီးရယူနိုင်ပါပြီ။ (သို့မဟုတ်) http://achitkabar.com/ (သို့မဟုတ်) http://love.lotayamm.com/မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်၍နေ့စဉ်ကြေးပေးသွင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အချစ်ကမ္ဘာကိုနေ့စဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအသုံးပြုသူအနေဖြင့် ဝန်ဆောင်ခ တစ်ရက်လျှင် (၉၉) ကျပ်သာကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
2.1. “အချစ်ကမ္ဘာ” ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ?
Wifiအသုံးပြု၍ဝင်ရောက်ပါကLogin Page သို့ ဦးစွာရောက်ရှိမည်။ subscribe လုပ်ပြီးသားနံပါတ် နှင့် subscribe မလုပ်ရသေးသောနံပါတ်ပေါ် မူတည်၍ နှစ်မျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
ထည့်သွင်းထားသောဖုန်းနံပါတ်သို့ ပေးပို့လာသော OTP ကိုအတည်ပြုကုဒ်နံပါတ်ထည့်ရန် နေရာတွင် ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက်အချစ်ကမ္ဘာဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Subscribe မလုပ်ရသေးသောဖုန်းနံပါတ် ဖြစ်ပါက
Landing page သို့ ဦးစွာရောက်ရှိပါမည်။ “ဝန်ဆောင်မှု ရယူရန်” ကိုနှိပ်ပြီးနောက် စာမျက်နှာသို့သွားပါ။ ထို့နောက်OTP ရယူနိုင်မည့်MPT ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုထည့်သွင်းပြီး OTP ရယူရန် ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပါ။ OTP ထည့်သွင်းပြီးပါကWelcome Page သို့ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီးခေတ္တ စောင့်ဆိုင်းပေးပါ။ ထို့နောက်အချစ်ကမ္ဘာဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
အချစ်ကမ္ဘာတွင်- (၁) ဆောင်းပါးများ
(၈)အချစ်မှတ်စုများဟူ၍ ကဏ္ဍ(၈)မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးများကဏ္ဍကို ဝင်ရောက်လိုက်သည်နှင့်အချစ်ရေးရာ၊ မိသားစုရေးရာနှင့် သူငယ်ချင်း၊အပေါင်းအသင်းတို့ကြား ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ပက်သတ်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမျိုးစုံ ကို ဖော်ပြရေးသားထားသော ဆောင်းပါးများကို ခေါင်းစဉ်အလိုက်ဖော်ပြထားပြီး သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုနှိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
အချစ်သီချင်းများတွင်အင်္ဂလိပ်အချစ်သီချင်းကောင်းလေးများစုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကဏ္ဍကိုသီးသန့်ဝင်ရောက်၍သာနားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးသီချင်းများအား Download ပြုလုပ်၍မရနိုင်ပါ။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဂိမ်းများကိုမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ် ဆော့ကစားနိုင်ပါသည်။ Download လုပ်၍မရနိုင်ပါ။
စမ်းသပ်ချက် မေးခွန်းမျာတွင် ပါဝင်သောအဖြေများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ရလဒ်ကို ဖတ်ရှု သိရှိနိုင်ပါသည်။
(၂) ဇာတာခွင် ဟု (၂) ပိုင်း ဝင် ပါသည်။
(၁) ပြည်တွင်းမှနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ၏ စုံတွဲဓာတ်ပုံများ၊ မိသားစုဓာတ်ပုံများ၊
(၂) နိုင်ငံခြားမှနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များ၏ စုံတွဲဓာတ်ပုံများ၊ မိသားစုဓာတ်ပုံများ
(၃) wallpaper များတို့ဖြစ်ပါသည်။ Wallpaperများတွင်လည်းဖုန်းအတွက်နှင့် လက်ပ်တော့ပ်အတွက်ဟူ၍လည်း ခွဲခြားဖော်ပြပေးထားပါသည်။
Wallpaper များကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာပုံကိုဖိ၍ save image ကိုနှိပ်ပြီး Download လုပ်နိုင်ပါသည်။
(၁)နိုင်ငံခြားအနုပညာရှင်များ၏အချစ်ရေး၊ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာအင်တာဗျူးများနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆိုင်သောဘာသာပြန်ဇာတ်လမ်းတိုလေးများ၊
(၂)အချစ်နည်းလမ်းဆိုင်ရာ Animation ဗွီဒီယိုများ၊
(၃)ရယ်မောပျော်ရွှင်ဖွယ်ဟာသဗွီဒီယိုများဟူ၍(၃)ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုများကိုလည်း Download လုပ်လို့မရပါ။
အချစ်မှတ်စုများတွင်အချစ်ဆိုရိုးစကားများ၊ နည်းလမ်းကောင်းစာစုလေးများ ပါဝင်ပါသည်။
ဤကဏ္ဍ(၁) မှ(၈)အထိကဏ္ဍများအားလုံးတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ ရလဒ်များကို Facebook နှင့်အခြားဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်တွင်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းကိုအသုံးပြုသူများအနေနှင့် မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုအားရပ်တန့်လိုလျှင် 8274သို့OFFဟုပေးပို့ပါ။ (သို့မဟုတ်)
http://achitkabar.com/ ကိုဝင်၍ Menuအောက်ရှိ “ဝန်ဆောင်မှုအားပယ်ဖျက်မည်” (Unsubscribe) ပေါ်တွင် နှိပ် ၍လည်းရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ http://achitkabar.com/ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အတွင်းရှိဆက်သွယ်မည် (Contact us) မှ လည်းကောင်း၊ကျွန်ုပ်တို့၏ Call Center ဖုန်းနံပါတ် (09 898225533)/ (106) မှ လည်းကောင်းသင်သိရှိလိုသောအကြောင်းအရာများကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
FAQs of “Love World” Service
1. What is “Love World” service?
Love World isawebsite related to love and relationship and exclusive for MPT users only.
Love World service target on Relationship, Family and Friendship Love and present love in various categories.
2. How to access “Love World” service?
Customers who want to subscribe Love World Service can send ON to 8274 (or) access through www.achitkabar.com (or) http://love.lotayamm.com/address via mobile devices using MPT data network.
The service can’t be access by WIFI or any other data network except from MPT.
3. How much is the charge for subscription “Love World” service?
Love World isadaily subscription service, service fees is99Ks/day.
There are eight main categories in our portal. They are-
(4) Text and Quiz
(8) Relationship Tips and Quotes
In this category, we described articles about relationship, family and friendship by
titles. So, you can easily choose and read the articles you are interested in.
Collections of hottest love songs are presented in songs category and you can only listen those songs but can’t download.
You can enjoy various game modes in this category.
(4) Quiz / Tests
Choose the correct answer to have fun and knowledge.
You have to choose one tarot card which would tell about your future love fortune.
This category is separated into two sections.
(1) Local celebrities’ couple and family photos and
(2) International celebrities’ couple and family photos
(3) Wallpapers (for phones and laptops).
For wallpapers, you can download them by pressing onawallpaper that you want to download and tap to “Download Image” .
This contains three subcategories-
(1) Translated short love videos and international celebrities’ interview videos
(2) Relation coaching animation videos
(3) Funny videos
You can watch what you want but can’t download them.
You can read about relationship tips and quotes. And you can also calculate the love compatibility of you and your partner by horoscope.
All contents of each category can’t be shared on Facebook and any other social Medias.
5. How to unsubscribe “Love World” service?
To unsubscribe, type OFF and send to 8274(or) visithttp://achitkabar.com/and go to Menu and click on Unsubscribe.
6. How do I contact for user support?
Feel free to contact us from website http://achitkabar.com/“Contact us” or
Call our call center at 09 898225533/ 106.
MPTမှ ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်
“အချစ်ကမ္ဘာ” ဝန်ဆောင်မှု ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
ဤစည်းမျဉ်းစည်းများအရ“အချစ်ကမ္ဘာ”ဝန်ဆောင်မှုကိုစီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ သင်သည် “အချစ်ကမ္ဘာ”ဝန်ဆောင်မှုသို့ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါကဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသဘောတူလက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုလက်ခံသဘောတူညီမှုမရှိပါက“အချစ်ကမ္ဘာ”ဝန်ဆောင်မှု ကိုအသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၁။ “အချစ်ကမ္ဘာ”ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသူသည်အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ဖြစ်ခဲ့ပါကအုပ်ထိန်းသူ၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူပြီးမှသာအသုံးပြုရပါမည်။
၂။ “အချစ်ကမ္ဘာ”ဝန်ဆောင်မှုအား MPT ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူများအားလုံးအခပေးစနစ်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ MPT ဆင်းမ်ကတ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုရန် ပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသူများကိုအခပေးသုံးစွဲသူအဖြစ် သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၃။ “အချစ်ကမ္ဘာ”ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုသူသည်အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူညီမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁။ ။စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုအပ်သည့်အချိန်၌ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ခြင်းစသည်တို့အားလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထိုဆောင်ရွက်မှုများအကောင်အထည်ပေါ်လာပါကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်များကိုစတင်အသုံးမပြုမီ ၁၅ ရက်ခန့် ကြိုတင်၍အကြောင်းကြားနိုင်ရန်ကြိုးစားပါမည်။
၂။ ။“အချစ်ကမ္ဘာ”ဝန်ဆောင်မှုကိုအခပေးအသုံးပြုနေသောသူများအတွက်အခါအားလျှော်စွာကျင်းပပြု လုပ်လေ့ ရှိသော Promotion များနှင့်အခြားသော Campaign များအတွက် လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းများကိုလိုအပ်သလိုထုတ်ပြန် ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ပြီးအငြင်းပွားမှုကိစ္စအကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက “အချစ်ကမ္ဘာ” ဝန်ဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာသဘောတူနားလည်ပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ကိုသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသော“အချစ်ကမ္ဘာ”ဝန်ဆောင်မှုသည် စာရင်းပေးသုံးစွဲသောဝန်ဆောင်မှု ရယူထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ “အချစ်ကမ္ဘာ”ဝန်ဆောင်မှုအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။အဖိုးအခကောက်ခံသည့်အကြိမ်ရေမှာစဉ်ဆက်မပြတ် နေ့စဉ် ကောက်ခံမှုရှိသည့် ၃၆၅ ရက် ပက်ကေ့ချ် ဖြစ်ပါသည်။စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုအမျိုးအစားဝန်ဆောင်မှု၏ တရားဝင်မှု ကာလမှာ၃၆၅ ရက်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်လျှင်အဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ငွေကောက်ခံခြင်းမရှိပါကလူကြီးမင်းအနေဖြင့် ထိုနေ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
နောက်ကြောင်းပြန်၍ ငွေကောက်ခံခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ငွေကောက်ခံ ခြင်းမရှိလျှင် ထိုနေ့များအတွက် လူကြီးမင်းထံမှအဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုကိုအတည်ပြုပြီးလူကြီးမင်းကိုငွေကောက်ခံသည့် နေ့မှစ၍ လူကြီးမင်းကိုတစ်ဆက်တည်းရက်ပေါင်း (၉၀)အတွက် ငွေကောက်ခံထားခြင်းမရှိပါကစာရင်းပေးသုံးစွဲမှုအလိုလျောက်ရပ်စဲမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့မဟုတ်သောစမ်းသပ်အသုံးပြုသည့် ကာလတစ်ခုအတွက် စာရင်းပေးသုံးစွဲရန် တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ပြီးလူကြီးမင်းသထံတွင် လုံလောက်သောငွေလက်ကျန်မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လူကြီးမင်းအားနောင်လာမည့် တစ်ဆက်တည်းနေ့ရက် သုံး(၃) ရက်အတွင်းငွေကောက်ခံရန် ကြိုးပမ်းသွားပါမည်။ လူကြီးမင်းတွင် လုံလောက်သောငွေလက်ကျန်မရှိဘဲထိုတစ်ဆက်တည်းသုံး(၃) ရက်အတွင်းငွေ ကောက်ခံမရရှိပါကဝန်ဆောင်မှု စာရင်းပေးသုံးစွဲရန် တောင်းဆိုမှုအလိုအလျောက် ရပ်စဲမည်ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်း၏အကြောင်းအရာအားရှာဖွေမှုပြုခြင်းနှင့် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဒေတာအဖိုးအခကျသင့် ပါမည်။ ကောက်ခံမှုအားလုံးတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်မည်ကိုသတိပြုပါ။
ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်းအပါအဝင် ၎င်းချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားဘဲလူကြီးမင်း၏မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို မျှဝေသုံးစွဲသည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်အတွက် လူကြီးမင်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များသည် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်ခြင်းသို့မဟုတ်အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များအရဝန်ဆောင်မှုအလိုအလျောက် ရပ်စဲခြင်းအချိန်ထိတရားဝင် တည်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
Terms and conditions of “A Chit Ka Bar” (Love World) Service
You should have known and agree the following Terms and Conditions (the “Terms”) before using A Chit Ka Bar (Love World) Portal Service. The application is being operated according to these terms and conditions. By taking service and using the application, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
For using “A Chit Ka Bar (Love World)” service, user have to be who are at least eighteen (18) years old of age. For under eighteen years, those users have to get their parent permission.
All MPT SIM card users are able to use “A Chit Ka Bar (Love World)” serviceby accepting of charging daily service fees. MPT users who agree the Terms and use the application will be recognized as daily paid user.
If you would like to use “A Chit Ka Bar (Love World)” service, you should have to follow and accept the following terms and conditions.
2. There will be occasional special promotions and campaigns for users and the necessary Terms for those promotions and campaigns will be announced in time.You properly should have known that if there were any argument concerned with those promotions and campaigns, only the decision of the application would be confirmed.
Ongoing use of Service requires an active Subscription. A Chit Ka Bar (Love Portal) service fees is 99 Ks/day.Charging frequency is daily charging with 365 days package. The validity period ofaSubscription-type Service is 365 days.